KITRA-BAREA : Amin’ny oktobra vao mety hisy fampivondronana ny mpilalao
Amin’ny fiantombohan’ny volana oktobra ho avy izao no hampivondrona ireo mpilalao ao amin’ny ekipam-pirenena Malagasy na Barea ny mpanazatra Nicolas Dupuis, raha ny nambarany, omaly. 1er septembre 2020
“Fanazaran-tena sy lalao ara-pirahalahiana no hatao amin’io”, hoy izy. Nanolotra soso-kevitra vitsivitsy ho an’ny Federasiona ihany koa ny tenany mikasika ny fitantanana ny kitra Malagasy ary miandry ny fanapahan-kevitra sy ny safidin’izy ireo. Marihina fa efa nisy hevitra naroson’ity mpanazatra ity ho an’ny Kaomity mpanatanteraka teo anivon’ny Federasiona teo aloha ary efa nanaiky ireo hevitra narosony ny kaomity mpanatanteraka.
“Tsapan’izy ireo fa tena ilaina ny fampivondronana mialoha ny lalao amin’i Côte d’Ivoire fa indrindra mba hisian’ny fahaiza-miaraka amin’ireo mpilalao vaovao indray”, hoy hatrany ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Notsipihiny koa fa zava-dehibe ho an’ny ekipam-pirenena malagasy ny fanaovana fanazaran-tena miaraka na dia herinandro iray monja aza. “Raha ao anatin’ny herinandro iray no tafaraka manao fanazaran-tena ny ekipam-pirenena dia efa zava-dehibe ao anatin’ny ekipa izany satria mba efa ahitana an’ilay fahazarana miaraka na“automatisme” eo amin’ireo mpilalao tsirairay avy”, hoy ny voalaza.
Nasiany tsindrim-peo manokana anefa na izany aza fa lafo sy sarotra ny fahafahana manao lalao ara-pirahalahiana, ary mbola tsy azo anatanterahana an’izany lalao izany ihany koa ny any Frantsa satria mbola voarara noho ny fiakaran’ny tahan’ny olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina covid-19 any an-toerana. “Mbola eo am-pitadiavana vahaolana izay zakantsika indrindra isika izao. Marina fa ny fiarahana amin’ny alalan’ny fampivondronana no zava-dehibe, fa raha iray na roa andro fotsiny kosa dia lasa mampametra-panontaniana sady manalasala”, hoy hatrany izy. Ankoatra ireo, nilaza koa i Nicolas Dupuis fa efa nifampiresaka tamin’ny Burkina-Faso izy mba hanao lalao ara-pirahalahiana, izay hatao any Portugal. Efa noresahiny tamin’ny FMF rahateo ny momba izany ary andrasana izay valin-teny avy amin’ity rafitra ity.
“Misokatra ny zotra nasionaly, hiverina ny sidina mankany ivelany” FEPETRA ARA-PAHASALAMANA (391) 21 septembre 2020 Sarona ilay miaramila mpamatsy basy sy mpiray tendro amin’ny jiolahy ANTSIRANANA (121) 24 septembre 2020 Tsy nandrenesam-peo intsony ny Fitsarana Malagasy RAHARAHA RABEKOTO RAOUL (115) 24 septembre 2020 Maty voatifitra i Sopa mpamaky fasana sy efa nahafaty zandary ANTSALOVA (97) 22 septembre 2020 Potiky ny afo koa ny Sekoly “Notre Dame de Lourdes” MANJAKANDRIANA (90) 21 septembre 2020 Nodimandry teo amin’ny faha-82 taonany Ramahafadrahona ZAVAKANTO (78) 22 septembre 2020